Dhalinyaro is abaabushay oo la dagaalamaya Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Dhalinyaro is abaabushay oo la dagaalamaya Al-Shabaab
Wararka naga soo gaaraya degmada aadan Yabaal ee Gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dhalinyaro si iskood ah isku abaabulay ay bilaabeen inay beegsadaan oo ay ka hortagaan Maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab.
Dhalinyaradaan ayaa is abaabulay ka dib markii Argagixisadaan ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u gaysanayaan Bulshada ku nool degmadaasi oo ay ka mitahay Dhac, dil iyo Afduub ay kula kacayaan dadka qaar.
Qaar ka mid ah dhalinyaradaan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay inaysan u dul qaadanayn in maalin kasta ay dadkooda dhibaato u gaystaan maleeshiyaadkaan Arxanka daran ee Al-Shabaab.
Sidoo kale masuuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka Shabeellaha Dhexe oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa iyana sheegay inay ka war haayaan dhalinyaradaasi is abaabulay, haatana ay qorshaynayaan in ciidamo ka tirsan dowladda ay gaaraan degmadaasi Aadan Yabaal.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa haatan sii xoojiyay howlgalada ka dhanka ah maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab, iyagoo khasaaro badan gaarsiiyay Argagixisada Al-Shabaab
Ciidanka Booliska oo maanta si rasmi ah ula wareegay Ammaanka Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho “Sawirro”
Howlgal lagu dilay Maleeshiyaad laguna soo qabtay hub oo ka dhacay Marka